THE မြွေ၏ဖြစ်ရပ်မှန် - လူသိများသောသားကောင်များနှင့် 'BIKINI KILLER' ၏အဖြစ်အပျက် - သတင်း
The Serpent: ကျောပိုးအိတ်ကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်စဉ်လူသတ်သမားအကြောင်းကိုရာဇဝတ်မှုစီးရီး၏ဖြစ်ရပ်မှန်
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကဘီဘီစီသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်စစ်မှန်သောရာဇ ၀ တ်မှုစီးရီးကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးနာမည်ကြီးများနှင့် ပို၍ ကြီးမားသောနေကာမျက်မှန်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသွေးဆောင်ခဲ့သည်။ 70 ဒရာမာရုံ Netflix ကအပေါ်ကျဆင်းသွားနှင့် Jenna Coleman, Tahar Rahim, Billy Howle နှင့် Ellie Bamber ရဲ့ဆရာဝန်ကားအဘယ်သူသည်ပါရှိသည်သိရသည်။ ဒါဟာနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားအမှတ်စဉ်လူသတ်သမားချားလ်စ် Sobhraj အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ သို့သော်အဆိုပါမြွေသည်အမှန်ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်အမှန်တကယ်ဘဝ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသလား
အခြေခံအားဖြင့် - ဟုတ်တယ်။ မြွေ (သို့) Bikini Killer သည်သူလူသိများလာသည်နှင့်အမျှ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး Interpol ၏အလိုရှိဆုံးသောရာဇ ၀ တ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်နီပေါ၊ အိန္ဒိယနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Hippie Trail တလျှောက်အနည်းဆုံးကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၁၂ ဦး ကိုသတ်ခဲ့သည်။ Sobhraj သည်ကျောက်မျက်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးကျောပိုးအိတ်များကိုအရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြင့်သယ်ဆောင်ကာသူတို့၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန်အမိုးအကာပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံဓားဖြင့်ထိုးခြင်း၊
Charles Sobhraj၊ မြွေနှင့် Bikini Killer ကားမည်သူနည်း။
Charles Sobhraj သည်ပြင်သစ်သူခိုးနှင့်လူသတ်သမားဖြစ်သည်။ သူသည်အိန္ဒိယ၊ နီပေါနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှခရီးသွား young ည့်သည်များအား ဖမ်းဆီး၍ သတ်ဖြတ်ကာခိုးယူခဲ့သည်။ သူသည်ဗီယက်နမ်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်ပြီးဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟိုချီမင်းမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်အောင်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သည်။
သူ၏သားကောင်များ၏အရေအတွက်အမှန်ကိုမသိရသေးပါ။ သူ၏ရာဇ ၀ တ်မှုများကို ၁၉၆၃ မှ ၁၉၇၆ ခုနှစ်အတွင်း ၁၃ နှစ်တာကာလအတွင်းတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ သူသည် psychopathy ခေါ်လူမှုဆန့်ကျင်ရေးအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါရှိသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ Sobhraj သည်ခရီးသွားများကိုအဆိပ်သင့်စေပြီးသူတို့၏ယုံကြည်မှုရရန်ကျန်းမာရေးပြန်ကောင်းအောင်ပြုစုပေးသည်။ ဒီကို Dominique ဇာတ်ကောင်နဲ့ဘီဘီစီစီးရီးမှာပြသထားတယ်။ Dominique သည်မြွေမှလွတ်မြောက်ပြီးပုံပြင်ကိုပြောပြရန်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သော Dominique Rennelleau အမည်ရှိတကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများမှာမူကံဆိုးခြင်းမဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် Sobhraj သည်သူတို့အားအဆိပ်ဖြင့်ထိုးခြင်း၊ ဓားဖြင့်ထိုးခြင်းဖြင့်သတ်ခြင်း၊
သူသည်ဤလူသတ်မှုများကိုသူ၏ရည်းစား Marie-Andrée Leclerc နှင့်လက်ျာလက် Ajay Chowdhury တို့၏အကူအညီဖြင့်ကျူးလွန်ခဲ့သည်။
Marie-Andrée Leclerc ကဘယ်သူလဲ၊ သူအခုဘယ်မှာလဲ။
ဘီဘီစီရဲ့ The မြွေအတွက် Monique အဖြစ်လူသိများနှင့် Jenna Coleman နေဖြင့်ကစား Marie-Andrée Leclerc, Sobhraj ရဲ့ရည်းစားများနှင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့နှစ် ဦး ဟာ Hippie Trail ကိုဖြတ်ပြီးအတူတူခရီးထွက်ခဲ့ကြပြီး Leclerc က Sobhraj ကို backpackers တွေဆီကနေခိုးယူဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ သူမသည်ကနေဒါနိုင်ငံ၊ ကွီဘက်၌သေဆုံးရန်ထောင်မှလွတ်လာပြီး ၁၉၈၄ တွင်သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမသေဆုံးသောအခါ 38 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
ဘီဘီစီဒရာမာကဖော်ပြသည်မှာသားကောင်များ၏အမည်အချို့ကိုပြောင်းထားသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်ချားလ်စ် Sobhraj ၏သားကောင်များဖြစ်သည်။ သူများကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်သတ်ဖြတ်ခြင်းသည်လက်တွေ့ဘ ၀ တွင်အတိအကျတူညီကြသည်။ စီးရီးများတွင်မပြရသေးသောအရာတစ်ခုမှာ Sobhraj သည်လူများအားသူတို့၏သစ္စာရှိမှုကိုကူညီရန်မကြာခဏကူညီလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်သူသည်ပြင်သစ်ရဲနှစ် ဦး အားပျောက်ဆုံးသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုသူတို့၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ Sobhraj သည်စိတ်ဝမ်းသွားရောဂါခံစားနေရသည့် Dominique ကိုကယ်တင်သောအခါအမှန်တကယ်အားဖြင့် Sobhraj ကအဆိပ်သင့်နေသောဤနည်းလမ်းကိုစီးရီးတွင်ပြသထားသည်။
Sobhraj ၏ပထမ ဦး ဆုံးလူသိများခံရသူတစ် ဦး flowered ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ဝတ်ထားဒီရေကန်ထဲမှာရေနစ်ခဲ့တဲ့ Seattle ကနေအမေရိကန်ခရီးသွား Teresa Knowlton ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဗီလ်တာဟက်ကမ်သည်ဘီလ်ဘီဘီစီနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တူရကီဟုလူသိများခဲ့သည်။ သူ၏ရုပ်အလောင်းကို Sobhraj နေထိုင်သောအပန်းဖြေစခန်းသို့ Leclerc နှင့် Chowdhury တို့နှင့်အတူလမ်းပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၎င်းနောက်ဒတ်ခ်ျကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်နှစ် ဦး ဖြစ်သော Henk Bintanja နှင့်သူ၏စေ့စပ်သူ Cornelia Hemker တို့သည်လမ်းဘေးတွင်လည်ပင်းညှစ်။ မီးရှို့ခံခဲ့ရသည်။ သူမက Hakim ရှာဖွေနေပြီးနောက် Vitali Hakim ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Charmayne Carrou ကို Sobhraj ၏လက်ဖြင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် Sobhraj သည်နီပေါတွင်ကနေဒါမှ Laurent Carrièreနှင့်အမေရိကန်မှ Connie Bronzich တို့ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယတွင် Avoni Jacob အမည်ရှိအမျိုးသားတစ် ဦး ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည် Jean-Luc Solomon အမည်ရှိသောပြင်သစ်အမျိုးသားတစ် ဦး အားအဆိပ်သင့်စေခဲ့ပြီးသူအားမစွမ်းဆောင်နိုင်အောင်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သော်လည်းမတော်တဆသေဆုံးမှုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်နယူးဒေလီရှိပြင်သစ်ခရီးသွား 60 ည့်သည် ၆၀ အုပ်စုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းရန်ကြိုးစားသော်လည်းအချို့သည်သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူအဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
ချားလ်စ် Sobhraj ယခုဘယ်မှာလဲ?
၁၉၇၆၊ နယူးဒေလီတွင်အဖမ်းခံရပြီးနောက် Sobhraj သည်အိန္ဒိယထောင်တွင် ၁၀ နှစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်အစောင့်များနှင့်မိတ်ဖွဲ့ခြင်းနှင့်ပါတီတွင်းကာလအတွင်းအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေခြင်းမှလွတ်မြောက်ပြီးသူ၏ဝါကျအဆုံးသတ်မှုကိုဆင်နွှဲခဲ့သည်။ သူထောင်ထဲကထွက်လာပြီးချက်ချင်းပြန်ဆယ်ယူပြီးနောက်ထပ်ဆယ်နှစ်ထောင်ချခဲ့သည်။
သူသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်လွတ်မြောက်သောအခါပြင်သစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားကာငွေအမြောက်အများရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်သူသည် Kathmandu သို့ပြန်လာခဲ့ပြီးနီပေါနိုင်ငံနှင့်လူသတ်မှုဖြင့်ရဲများကဖမ်းဆီးခဲ့သည် ယနေ့တိုင်အောင်ထောင်ထဲမှာနေဆဲဖြစ်သည် ။ သူကသူအာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့ဤအမှုကိုကျယ်ပြန့်သဘောတူညီခဲ့သည်။
• သူတို့အခုဘယ်မှာလဲ? အဆိုပါမြွေလူသတ်မှုအမှုကနေအစစ်အမှန်ဘဝကလူ